Diyopost.com :: उपेन्द्र देवकोटाको सम्झनामा बाबुरामको १५६ शब्द !! "ईतिहासमा तिमि अमर भएका छौ, तिम्रो जय होस” उपेन्द्र देवकोटाको सम्झनामा बाबुरामको १५६ शब्द !! "ईतिहासमा तिमि अमर भएका छौ, तिम्रो जय होस” - Diyopost.com
उपेन्द्र देवकोटाको सम्झनामा बाबुरामको १५६ शब्द !! “ईतिहासमा तिमि अमर भएका छौ, तिम्रो जय होस”
काठमाडौँ । पुर्व प्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले वरिष्ठ न्युरो सर्जन डा. उपेन्द्र देवकोटाको देहावसानमा शोक व्यक्त गरेका छन । सोमबार राति निधन भएका देवकोटालाई सम्झिदै भट्टराईले देवकोटा जस्तो प्रतिभावान व्यक्तिसंग संगत गर्न पाउदा आफ्नो जीवनमा पनि ठुलो योगदान पुर्याएको बताए । किशोरावस्थादेखी साथ, संगत र प्रतिस्पर्धाले आफ्नो जीवनमा पनि ठुलो प्रभाव पारेको भट्टराईले स्मरण गरेका छन ।
भट्टराईले सामाजिक संजालमार्फत देवकोटा र आफ्नो सम्वन्धको बारेमा बताउदै उनको देहावसानले मर्माहत तुल्याएको उल्लेख गरेका छन । दुईजनाबिच को विषयलाई लिएर थुप्रै सामाजिक जिज्ञासा र भ्रमहरु भएतापनि सामाजिक उन्नतीको लागी दुबैले उल्लेखनिय योगदान पुर्याएको उनले बताए । जीवनको छोटो कालखण्डमा समाज, देश र मानवजातिलाई गर्नुपर्ने र गर्नसकिने सबै काम देवकोटाले गरेको र नेपाली इतिहासमा एक अमर व्यक्तिको रुपमा स्थापित भएको उनले बताए ।
सामाजिक संजालमा बाबुरामको स्ट्याटस
अन्तिम विदाइ, प्रिय उपेन्द्र ।
आज अन्तिम पटक तिम्रो भौतिक शरीरसंग विदा लिंदा मेरा मनमष्तिष्कमा हामी दुवै जना १० देखि १८ वर्षको किशोरावस्थामा सहपाठी हुँदाका अत्यन्त भावमय अनुभूतिहरूको स्मरण गरिरहेछु । तिमी जस्तो मेधावी र बहुप्रतिभासम्पन्न सहपाठीसंगको प्रतिस्पर्धापूर्ण सहकार्य र सहयात्राले आफ्नो जीवनमा ठुलो योगदान पुर्याएकोमा गर्वको अनुभूति गर्दैछु । तिमीप्रति अन्तरहृदयैदेखि कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु ।
हाम्रो सम्बन्धवारे थुप्रै सार्वजनिक जिज्ञासा र चासो ( केही भ्रम पनि ) रहे पनि त्यसले हामी दुवैको विकासमा र अन्ततः देश र समाजको उन्नतिमा सकारात्मक योगदान पुर्याएको मान्दछु। हाम्रो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा एक अर्कालाई तल तान्ने भन्दा पनि एक अर्का भन्दा अघि बढ्ने वा माथि उठ्ने प्रकृतिको थियो र त्यसैले सबैलाई लाभ पुर्याएको थियो भन्ने ठान्दछु । यसवारे कसैले थप अनुमानको खेती नगरून् भन्ने पनि आग्रह गर्दछु ।
तिम्रो जीवन अत्यन्त सफल छ । तिमी अमर भएका छौ । एउटा मान्छेको छोटो जीवन कालखण्डमा समाज, देश र मानवजातिलाई गर्नुपर्ने र गर्नसक्ने काम तिमीले गरेकाछौ । तिम्रो सहपाठी र समकालीन सहयात्रीहरू सबै तिमी प्रति गौरवान्वित छौं, आभारी छौं, ऋणी छौं । तिम्रो जय होस् ।